Abadlali abangu-5 beSundowns kumele bavuselele izinkontileka | News24
Abadlali abangu-5 beSundowns kumele bavuselele izinkontileka
Cape Town – Abadlali abangu-5 beMamelodi Sundowns, sebesonyakeni wokugcina ngokwezivumelwano zabo neqembu kanti lokhu kusho ukuthi sebengakwazi ukusayina ama-pre-contract noma yinaliphi iqembu ngoJanuwari uma ngabe bengavuseleli neSundowns.
Laba dlali ngoWayne Sandilands, uHlompho Kekana, uThabo Nthethe, u-Anthony Laffor kanye noWayne Arendse.
Bonke badlale indima ebalulekile ekusizeni amaBrazilians ukuthi anqobe isicoco se-2016 CAF Champions League.
Kodwa-ke okudala ungabazane ukuthi laba dlali bazovuselelelwa yini izinkontileka ukuthi bonke sebefike eminyakeni engu-30 yobudala.
ISoccer Laduma ibika ukuthi iKaizer Chiefs, iSuperSport United kanye neBidvest Wits sebekhombise ukuba nentshisekelo yokusayina uKekana, kodwa basalinde ukubona ukuthi izovuselelwa yini inkontileka yakhe eChloorkop.
Ngaphezu kwalokho uGlyn Binkin, omele izindaba zomsebenzi kanozinti waleli qembu, uSandilands, utshele leli phephandaba ukuthi unethemba lokuthi uzohlangana nabathintekayo kulolu daba ukuze abone ukuthi yiziphi izinhlelo abanazo ngalo nozinti.
Ngakolunye uhlangothi, uLaffor, kubikwa ukuthi kungenzeka alule inkontileka yakhe naleli qembu yize noma kungekho obekusavunyelwene ngakho.